Qaababka Galmada Cusub? - iftineducation.com
Qaababka Galmada Cusub?
aadan21 / July 5, 2016
iftineducation.com – Sida ay soo saareen baadhayaal caalami ah oo ku takhassusay cilmiga Nituration-ka ayaa isku dhafka muusku waxa uu ka caawiyaa raga inuu jidhkoodu kala dago, dheefshiidkooduna si habsami ah u shaqeeyo, arinkan oo kor u qaadaya awooda ninku uu bixinayo xilliga galmada.
Sida ay lagu sheegay badhitaannadan faraha badan ee lagu sameeyay muuska ayaa waxa lagu ogaaday in isku dhaf ay ka kooban yihiin curiyayaasha dabiiciga ah ee muusku uu khudaartan ka dhigo sida kiniinka kor u qaada awooda galmada ee loo yaqaan viagrada, isaga oo ninka kusoo kordhinaya awood layaab leh, isla markaana kor u qaadaya dareenkiisa raganimo.
Waxaana xusid mudan in diraasadan ay ka qayb qaateen 148 nin oo kana dhacday wadammada Germany iyo France, iyada oo soconaysay muddo 4 bilood ah, taasi oo ay ragani cabeen sharaab u digma 4 ilaa 6 xabbo oo muus ah, looguna dhex walaaqay qofkastaaba nooca khudaar ee uu ka helo, waxyaruun ka hor intaanay samayn galmada.
HALKAAAN KA DAAWO MUUQALKA OO TOS AH
FITAMIIN C: Muhiimadda Uu U Leeyahay Wadnaha Iyo Caafimaadka Qofka